Kedu ka anyị siri dị nchebe ka afọ iri abụọ gachara Septemba 11? Na -eche echiche!
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » WTN » Kedu ka anyị siri dị nchebe ka afọ iri abụọ gachara Septemba 11? Na -eche echiche!
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Safety • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche • WTN
dere Dr. Peter E. Tarlow
Njem njem taa siri ezigbo ike karịa ka ọ dị afọ iri abụọ gara aga. N'ezie, ụlọ ọrụ njem agbanweela nke ukwuu na ngwa ngwa nke na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla kwuru gbasara ya na -adịzi ngwa ngwa. Afọ iri abụọ gara aga, ọ bụ mmadụ ole na ole nwere ike chepụta mbibi akụ na ụba na ọnwụ nke COVID-19 kpatara, ma ọ bụ njikwa mmekọrịta ọha na eze nke ọrịa kpatara. Iji mee ka ihe doo anya, na Septemba 11, 2001, ihe karịrị mmadụ 3,000 nwụrụ n'otu ụbọchị. Ugbu a n'ime afọ COVID-19, ọrịa ọjọọ gburu ihe karịrị nde mmadụ anọ.
The Netwọk Njem Nleta ỤwaOnye isi ala, Dr. Peter Tarlow, wepụtara akụkọ nchebara echiche na -atụgharị uche na afọ 20 kemgbe Septemba 11, 2001, na ụzọ ụwa njem na njem na -agbanwe.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị mmadụ ka na -echeta ụbọchị ọjọọ ndị ahụ, ugbu a, otu ọgbọ dum amụrụ mgbe Septemba 11, 2001. Maka ha 9/11 bụ akụkọ ihe mere eme mere ogologo oge gara aga.
Ọrịa ọgbụgba COVID-2020-21 mepụtara usoro ihe ịma aka ọhụrụ maka njem nlegharị anya. Maka ọtụtụ ndị na -eto eto, ha enweghị ike iche ụwa nke njem na -enweghị mgbochi yana ọtụtụ anaghị aghọta na ndabere maka ọtụtụ mmachi njem anyị sitere na ihe mere na Septemba 19, 11.
N'ime iri afọ abụọ gara aga, ndị njem na ndị ọkachamara njem na -achọpụta na echiche ochie na "nchekwa anaghị agbakwụnye ihe ọ bụla na ala" abụghịzi ndị ọrụ nlegharị anya taa na -ahụ nchekwa dị ka akụkụ dị mkpa nke mbọ ahịa ha. Nchebe njem nlegharị anya na ndị uwe ojii, ozugbo nwa nwa nke njem na ụwa njem, bụzi akụkụ dị mkpa nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ndị njem na ndị ahịa njem anaghị atụ egwu nchekwa; ha na-anabata akụkụ ya niile, site na usoro mgbochi iyi ọha egwu ruo n'ihe gbasara ahụike ọha. Ndị njem na-ajụ ndị na-ere ahịa gbasara ya, mụta maka ya, ma jiri ihe nchekwa dị ka ihe dị mkpa na mkpebi mkpebi njem. Ọzọkwa, na COVID-19, ọha na-atụlezi usoro ahụike dịka akụkụ nke nchekwa njem.
Otu n'ime ụzọ ọgbọ ọhụrụ nchekwa a na -abịa bụ na uto nke ndị nchekwa onwe (nke a makwaara n'akụkụ ụwa ụfọdụ dị ka ndị uwe ojii onwe).
Nchedo nkeonwe, yana TOPPs (ndị uwe ojii na-ahụ maka njem nlegharị anya na ọrụ nchekwa) abụrụla ihe dị mkpa maka ụlọ ọrụ njem na-aga nke ọma. Eziokwu a bụ eziokwu ọkachasị na mba, dịka United States na akụkụ Latin America, ebe enwere mmetụta mgbochi ndị uwe ojii yana ebili mmiri na-arịwanye elu yana na ebe nchekwa dị.
Agbanyeghị na ndị nchekwa nchekwa nkeonwe a anaghị enwe ikike ijide, ha na -enye ọnụnọ na oge nzaghachi ozugbo.
Dị ka nke a, n'oge ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na akụ na ụba na -arị elu, nchekwa nkeonwe maka mpaghara njem ụfọdụ abụrụla nhọrọ ịtụle.
Ọ ghọwokwa nhọrọ ịtụle maka gọọmentị obodo chere ihu n'ọchịchọ ọha na eze maka nchekwa na enyemaka pụọ ​​n'ụtụ ụtụ isi dị arọ. N'ime afọ iri abụọ gara aga, ọha mmadụ na -atụ anya ụdị nchekwa ọ bụghị naanị n'ọdụ ụgbọ elu kamakwa n'ebe ndị dị ka ebe ịzụ ahịa, ebe ntụrụndụ/ogige ntụrụndụ, ọdụ ụgbọ njem, ụlọ oriri na nkwari akụ, ebe mgbakọ, ụgbọ mmiri na ihe egwuregwu.
N'agbanyeghị ọtụtụ ndozi n'ụwa nchekwa nchekwa njem na TOPP, a ka nwere ọtụtụ ihe ime.
Kedu ka anyị na ụlọ ọrụ njem na -eme n'ime iri afọ gara aga
Industrylọ ọrụ ụgbọ elu
Ikekwe ọ nweghị akụkụ nke njem nlebara anya lebara anya gburugburu ụwa dịka ụlọ ọrụ ụgbọ elu. Afọ iri abụọ gara aga enwela ọfụma maka ụlọ ọrụ ụgbọ elu, ebe 2020 bụ nnukwu ụlọ ọrụ dara. Obi abụọ adịghị ya na ụgbọ elu bụ akụkụ dị mkpa nke njem nlegharị anya: na -enweghị ụgbọ elu ikuku, ọtụtụ mpaghara na -anwụ naanị, okporo ụzọ ikuku bụ akụkụ dị mkpa nke ma azụmahịa njem ntụrụndụ yana nke azụmahịa, njem azụmahịa, na mbupu ngwongwo.
Njem ụgbọ elu taa adịchaghị mma karịa ka ọ dị afọ iri abụọ na otu gara aga ma ọ bụ ọbụna afọ abụọ gara aga. Ọtụtụ ndị njem na -ajụ ajụjụ ma ọ bụrụ na usoro ndị a niile dị mkpa ma ọ bụ na -eche ma ọ nwere ike ọ gaghị abụ ihe ezi uche na -adịghị na ya, ihe efu na enweghị isi. Ndị ọzọ nwere echiche na -emegide ya. N'ime oge ọrịa na -efe efe, nchekwa njem ụgbọ elu abụghị naanị maka ịchekwa ụgbọ elu, kamakwa maka ijide n'aka na ọdụ ụgbọ elu dị ọcha na njikwa akpa adịghị agbasa ọrịa.
Ọ bụghị naanị na iwu nchekwa ọhụrụ emeela ka ndụ siere ndị njem ike, kamakwa ọtụtụ ụdị ọrụ ndị ahịa ajụla. Site na nri ruo na ịmụmụ ọnụ ọchị, ndị na -anya ụgbọ elu na -enye obere ihe na -adịkarị ka ọ na -enwe mmasị na ụzọ ha si emeso ọha mmadụ. Ya mere, ọ bụ ihe na -akụda mmụọ na ọ dịchaghị ihe a rụzuru na nchekwa ụgbọ elu. Ọtụtụ ndị ahịa na -eche ma nchekwa ụgbọ elu na -emeghachi omume karịa ime ihe ike.
Obodo dị ka azụmaahịa na -emepe ụzọ maka obodo Caribbean
Dr. Peter E. Tarlow bụ ọkà okwu a ma ama na ọkachamara na ụwa ọkachamara na mmetụta nke mpụ na iyi ọha egwu na ụlọ ọrụ ndị njem, ihe omume na ihe ize ndụ njem nleta, na njem na mmepe akụ na ụba. Kemgbe 1990, Tarlow na-enyere ndị njem nleta aka na nsogbu dịka nchekwa na nchekwa njem, mmepe akụ na ụba, ahịa okike, na echiche okike.
Dịka onye edemede ama ama na nchekwa nchekwa njem, Tarlow bụ onye edemede na-enye aka maka ọtụtụ akwụkwọ nchekwa nchekwa njem, ma na-ebipụta ọtụtụ agụmakwụkwọ na isiokwu nyocha gbasara okwu nchekwa gụnyere isiokwu ebipụtara na The Futurist, Journal of Travel Research na Njikwa nchekwa. Akwụkwọ akụkọ Tarlow dịgasị iche iche nke ndị ọkachamara na ndị ọkà mmụta gụnyere akụkọ gbasara isiokwu dịka: “njem nlegharị anya gbara ọchịchịrị”, echiche nke iyi ọha egwu, na mmepe akụ na ụba site na njem, okpukperechi na iyi ọha egwu na njem njem ụgbọ mmiri. Tarlow na-edekwa ma na-ebipụta akwụkwọ akụkọ njem nlegharị anya na-ewu ewu n'ịntanetị nke ọtụtụ puku ndị njem na ndị ọkachamara njem gburugburu ụwa na-ebipụta n'asụsụ Bekee, Spanish na Portuguese.